ခဈြသူ မိနျးကလေး အပြိုစဈ မစဈ သိအောငျ စမျးသပျတဲ့နညျးလေး – Cele Cupid
Ever Best | November 30, 2020 | Knowledge | No Comments
အပြိုစဈ မစဈ စမျးသပျမညျ့သူက ခဈြသူ ရညျးစားတော့ ရှိထားရမယျနျော (သူမြားကို စမျးသပျ ရငျ ပါးရိုကျခံ ရမှာပေါ့ )။ ရဇေလုံ ကွီးကွီး ရထေညျ့ပွီး သငျ့ရဲ့ ရညျးစားကောငျမလေး ကို ရထေဲ မှာ ငွိမျငွိမျလေး ထိုငျခိုငျးပါ (အဝတျဗလာကွီး နဲ့တော့ မထိုငျခိုငျးနဲ့ အအေးပတျနဦေးမယျ)။
သူမ ထိုငျနတေဲ့ အခြိနျ ရကေို ကွညျ့နပေါ.ရကေ ငွိမျနလေား. ဒါမှမဟုတျ ရပေူစီဘောငျး ဘောလုံးလေး တှေ ထှကျနလေား ( ဘီးကြှတျ အပေါကျရနေဲ့စိမျရငျ ထှကျလာသလိုပေါ့ )။ ပူစီဘောငျး လေးတှေ ထှကျနရေငျ တော့ ရစေကျခပြွီး အမြှသာ ဝလေိုကျတော့။
ရပေူစီဘောငျး ဘောလုံးလေး တှလေညျး မထှကျ ရကေလညျး ငွိမျနတေယျ ဆိုရငျ အပြို စဈတယျ.. ဒါကွောငျ့ သူကို လကျလှတျ မခံနဲ့ ။ မပွညျ့တဲ့အိုး က ဘောငျဘငျ ခတျတယျ။ တကယျကွီး သှားစမျးပွီး ပါးရိုကျ မခံရပါစနေဲ့ ဘျောဒါတို့ရေ။
အပျိုစစ် မစစ် စမ်းသပ်မည့်သူက ချစ်သူ ရည်းစားတော့ ရှိထားရမယ်နော် (သူများကို စမ်းသပ် ရင် ပါးရိုက်ခံ ရမှာပေါ့ )။ ရေဇလုံ ကြီးကြီး ရေထည့်ပြီး သင့်ရဲ့ ရည်းစားကောင်မလေး ကို ရေထဲ မှာ ငြိမ်ငြိမ်လေး ထိုင်ခိုင်းပါ (အဝတ်ဗလာကြီး နဲ့တော့ မထိုင်ခိုင်းနဲ့ အအေးပတ်နေဦးမယ်)။
သူမ ထိုင်နေတဲ့ အချိန် ရေကို ကြည့်နေပါ.ရေက ငြိမ်နေလား. ဒါမှမဟုတ် ရေပူစီဘောင်း ဘောလုံးလေး တွေ ထွက်နေလား ( ဘီးကျွတ် အပေါက်ရေနဲ့စိမ်ရင် ထွက်လာသလိုပေါ့ )။ ပူစီဘောင်း လေးတွေ ထွက်နေရင် တော့ ရေစက်ချပြီး အမျှသာ ဝေလိုက်တော့။
ရေပူစီဘောင်း ဘောလုံးလေး တွေလည်း မထွက် ရေကလည်း ငြိမ်နေတယ် ဆိုရင် အပျို စစ်တယ်.. ဒါကြောင့် သူကို လက်လွတ် မခံနဲ့ ။ မပြည့်တဲ့အိုး က ဘောင်ဘင် ခတ်တယ်။ တကယ်ကြီး သွားစမ်းပြီး ပါးရိုက် မခံရပါစေနဲ့ ဘော်ဒါတို့ရေ။
လကေ့ငျြ့ခနျး ပွငျးပွငျးထနျထနျ လုပျစရာမလိုဘဲ ၂၁ ရကျ လမျးလြှောကျရုံနဲ့ ပိနျသှယျစမေယျ့ နညျးလမျး